BBC Somali - Cayaaraha - Chelsea 0-0 Tottenham
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Maarso, 2012, 16:21 GMT 19:21 SGA
15:00 Chelsea iyo Tottenham 0-0 ayay ku kala baxeen. Waa inoo todobaadka dambe ee cayaartan oo kale.
14:53 Arsenal hadii ay ka badiso Aston Villa sadex dhibcood ayay ka sare maraysaa Tottenham oo ay sii xaqiiqsanaysaa booska sadexaad.
14:51 Chelsea waxay yeelanaysaa 50 dhibcood.
14:47 Tottenham 55 ayay yeelatay, iyadoo Chelsea-na 50 yeelatay. Arsenal iyo Tottenham isku dhibco ayay leeyihiin 55 mid walba.
14:45 Waxay natiijadan fursad siinaysaa kooxda Arsenal oo hadda sadexaad ku jirta, goor dhowna cayaaraysa.
14:40 Chelsea iyo Tottenham 0-0 ayay ku dhamaatay.
14:39 Bale oo ka laaday kubadda bannaanka oo laad toos ahayd waxaa bixiyay goolhaye Peter Cech. oo koone noqotay aan dhalan.
14:36 Bale ayaa laad toos ah soo laaday balse Chelsea ayaa madaxa ku soo bixisay.
14:34 Drogba ayaa dusha mariyay kubadda.
14:33 Ilaa shan daqiiqo ayaa ka dhiman dhamaadka cayaarta.
14:30 Solomon Kalou ayaa badalay Sturrdige.
14:26 Cayaartu waxay wali taagan tahay 0-0.
14:23 Louis Saha oo badal ku soo galay oo goolhayaha la maray, ayaa u dhigay meel halis ah Adebayor, balse Cahil ayaa ka bixiyay.
14:22 Wali cayaartu waa Eber iyo eber.
14:17 Birta ayay ku dhufatay kooxda Chelsea oo fursadihii ugu qaali sanayd ay heshay, balse ma dhalan.
14:11 Koone ayay u saaray kubadda Tottenham oo Walker ayaa habadka ku bixiyay.
14:10 Sandaros ayaa calaamadda digniinta la siiyay kadib markii uu dhulka dhigay Essien.
14:09 Cayaarta ayaa hakad gashay kadib markii Assou-Ekotto qalad laga dhigay, Chelsea ayaa hadda laadanaysa.
14:05 Chelsea oo weerar qaaday ayaa Assou-Ekotto uu dibedda uga saaray oo kubaddu ay koone noqotay, taasoo ay Chelsea iska qasaarisay.
14:05 Chelsea iyo Tottenham oo ku cayaaraya garoonka Stamford Bridge, waxaana ay maraysaa 0-0.
14:00 Gareth Bale ayaa kubad la dhexmaray difaaca Chelsea oo u dhigay Van de Vaart oo isaguna shabaqa dhinac kaga dhuftay.
13:59 Cayaartu 0-0 ayay maraysaa, iyadoo labada kooxba fursado iska qasaariyeen.
13:57 Tottenham ayaa hadda kubadda isku dhiidhiibanaysa kadib markii ay iska caabiyeen weeraro isdaba joog ah oo Chelsea ay ku haysay.
13:55 Sturridge wkubad uu madaxa ugu soo dhigay Drogba goolka afkiisa uu dibed iskaga bixiyay.
13:54 Essien calaamad digniin ah ayaa la siiyay kadib markii uu lug u dhigay Mordric.
13:53 Chelsea ayaa hadda weerar ku heysa goolka Tottenham balse ugu dambayntii kubad sare oo goolka afkiisa la soo dhigay uu goolhayaha Tottenham kubadda soo doontay balse Sturidge ayaa qalad ku galay.
13:52 Kubadda rogaal celis ah oo Chelsea ay weerar ku qaaday goolka Tottenham ayaa dhexda laga soo celiyay.
13:51 Tottenham ayaa hadda koone soo laadanaysa.
13:51 Tottenham markiiba weerar ayay la gashay oo hadda Van der Vaart kubadda laga saaray.
13:50 Qaybtii labaad ayaa bilaabatay oo Totenham ay kubadda laadatay.
13:50 Kubadda ayaa dhexda taalla hadda oo Tottenham ay laadanaysaa.
13:49 Hadda ayay cayaartoydu mar kale dib ugu soo laabteen garoonka.
13:48 Frank Lampard waxaa wali wax uga harsan yihiin goolkiisa 150-aad, wuxuuna noqon karaa cayaaryahanka qadka dhexe ee ugu horeeyay ee ku guulaystay magacaas.
13:47 Tottenham, waxay waayeen oo laga badiyay sadex ka mid ah cayaarihii shan tahaa ee ugu dambeeyay uguna heerka sareeyay.
13:46 Tottenham, shantii kullan ee ugu dambeeyay waxay ka heshay 2 dhibcood, iyadoo laga filayay 15 dhibcood.
13:42 Stoke iyo Man City, waxay yeelanayaan cayaarta fiidnimada.
13:42 Swansea oo cayaaro wacdaro leh soo bandhigtay sanadka oo ay tartanka soo gashay, waxay la cayaaraysaa Everton.
13:41 Sunderland iyo QPR ayaa is arkaya.
13:41 Norwich V Wolves.
13:41 Bolton iyo Blackburn way kulmayaan.
13:40 Liverpool ayaa Wigan la cayaari doonta.
13:39 Arsenal waxay la cayaari doontaa Aston Villa oo garoonka Emirates ay ku martigalinayaan.
13:38 Cayaaro badan oo xiise leh ayaa galabta dhici doona.
13:36 Bale iyo Modric oo kubadda si fiican isugu dhiidhiibay ka hor fursadii qaaliga ahayd ee ugu dambaysay, ayaa Siciid, Deysane iyo Ahmed ay leeyihiin waxay noqon kartaa mid soo noqnoqota oo Tottenham ay fursado badan oo la mid ah heli karaan.
13:36 Intii sanadkan 2012 lagu jiray Chelsea lagama badan ilaa sideed cayaarood oo koobab kala duwan ah, oo ay ku cayaarto Stamford Bridge.
13:35 Eber iyo eber ayay ku dhamaatay qaybta hore.
13:34 Fursadii ugu wanaagsanayd ayaa Tottenham ay u dhalan wayday ugu dambayntii Peter Cech ayaa gacanta ku ixiyay. Qaybtii hore ayaana sidaas ku dhamaatay.
13:33 Koonihii ayaa goolka afkiisa la soo dhgay balse Terry ayaa saaray isagoo isku dayay in uu dhaliyo gool.
13:32 Ramires ayaa geeska kala soo galay kubadda balse Yonis Kabul ayaa kubadda ka saaray, oo Koone ayay noqotay.
13:31 Wali cayaartu waa 0-0, iyadoo qaybtii hore gabagabo tahay.
13:30 Chelsea ayaa hadda kubadda kula wareegaysa qaybta Tottenham.
13:29 Van der Vaart oo laga dhigay kubadda oo Chelsea ay laadatay.
13:28 Kubadda haysashadeeda ayaa hadda ah 52% Chelsea iyo 48% Tottenham. Tottenham way dhaantaa bilowgii cayaarta.
13:27 Bale ayaa la riday oo Lampard uu dhulka dhigay, laad toos ah waxaa loo dhigay laad toos ah.
13:26 Marka Tottenham ayaa weerar ah.
13:24 Chelsea ayaa fursad ka heshay goolka afkiisa balse meel cidla ah ayuu dhigay.
13:22 Cayaaryahanka Torres ee Chelsea ayaa is diyaarin bilaabay oo isku kululaynaya bannaanka si uu u soo galo hadii loo baahdo.
13:21 Drogba garoonka dibediisa ayaa lagu dawaynayaa.
13:20 Adebayor ayaa kubadda la fakaday oo la galay sideed iyo tobanka, goolka afkiisa ayuu dhigay balse Walker oo goolka ag taagnaa wuu gaari waayay.
13:19 Kubadda oo Parker gacanta uga dhacday kubadda ayaa loo dhigay in ay Chelsea laadatao.
13:18 Chelsea dardar xoog leh ayay bilowday oo fursado dhowr ah ayay heshay, balse kama faa'iidaysan.
13:16 Chelsea rigoore ama gool ku laad ayay damacsanayd balse garsooraha ma dhigin.
13:15 Frank Lampard ayaa ku dhacay gudaha diilinta sideed iyo tobanaan kadib markii Gallas uu ka hormaray.
13:14 Chelsea ayaa goolka ka soo laadanaysa kadib markii uu madaxa kubadda ku bixiyay Van der Vaart.
13:13 Cayaarta oo ilaa nus saac socotay wax goolal ah lama kala dhalin.
13:12 Mata iyo goolhayaha Tottenham ayaa kubad isugu soo haray balse waxaa ku hormaray goolhayaha Tottenham.
13:12 Adebayor ayaa qalad ku galay Terry oo loo dhigay Chelsea kubadda in ay laadatay.
13:10 Bosingwa wuxuu gaari waayay kubad dheer oo loo soo dhigay dhinaca goolka Tottenham.
13:08 Younis Kabul oo Tottenham ah ayaa qalad laga dhigay oo Chelsea ay kubadda laadatay.
13:06 Kubadda uu dhinaca koonaha kala soo galay Drobba ayaa difaaca Tottenham iska saaray.
13:05 Petr Cech waxay cayaartan u noqonaysaa tii 250 ee uu u soo safto Chelsea, iyadoo Ramires uu cayaarayo iyadoo uu 25 jirsaday.
13:05 Goolhaye Cech ayaa hadda kubadda laaday.
13:04 Sturdige ayaa offside laga dhigay iyadoo calanhayuhu sheegay in uu qadka ka baxsan yahay.
13:03 Essien oo qalad lagu galay ayaa garsooruhu dhigay oo Chelsea kubadda laadatay.
13:01 Chelsea oo gurigeeda lagu cayaarayo ayaa 64% kubadda haysata.
13:00 Scott Parker ayaa kubadda madaxa ku saaray, oo koono ayay heshay Chelsea.
12:57 Drogba kubadda loo soo dhigay gudaha sideed iyo tobanka ayuu dhamaystiri kari waayay markii laga difaacay.
12:56 Weeraryahanka dhinaca weerarka ee Tottenham Aaron Lennon macayaari doono inkastoo uu dib u bilaabay tababarka kadib dhaawac dhinaca muruqa ah.
12:55 Koone ayaa Tottenham ay soolaadatay balse Chelsea ayaa madaxa ku soo bixisay.
12:54 Ilaa hadda cayaartu way isku dheelitiran tahay.
12:52 Chelsea ayaa fursad qaali ah heshay oo goolka afkiisa markay la marayaan ayaa laga difaacay.
12:52 Captain John Terry wuu ka maqnaa cayaartaas dhaawac awgii balse waxaa la filayaa in uu maanta uu ka mid noqdo cayaartoyda lagu bilaabayo.
12:50 Cayaartu dardar xoog leh ayay ku bilaabatay.
12:49 Chelsea waxay darsaysaa xaaladda Branislav Ivanovic oo cayaartii Man City dhaawac kaga baxay cayaarta.
12:48 Chelsea ayaa kubadda laadatay, oo way bilaabatay cayaarta.
12:45 Chelsea iyo Tottenham waxay u tartamayaa booska afaraad.
12:44 BBC Somalia Barnaamijka England Premier League waxaa daadihinaya Axmed Cabdinuur oo ay wehliyaan Axmed Deysane iyo Siciid Cali Muuse.
12:44 Garoonka ayay soo galeen Kooxuhu.
12:42 Hadda ayay cayaartoydu isu diyaarinayaan in ay garoonka soo galaan
Halkan kala soco qoraal toos ah, oo ku saabsan cayaarta Chelsea iyo Tottenham. Waxay cayaartu bilaabanaysaa saacad kadib, 3:45 galabnimo saacadda Africada bari.